Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: Statement by the President Barack Obama on Aung San Suu Kyis detention
Statement by the President Barack Obama on Aung San Suu Kyis detention
Statement by the President Barack Obama on Aung San Suu Kyis detention; UNSC press statement on Burma; Supporters outside Insein prison; Continous protests around the world; and responses from the leaders of the 9th ASEM Foreign Ministers' Meeting.
Posted by yahutha at 2:06 AM
ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး အောက်မေ့ဖွယ် ၃၃ နှစ်ပြည့် နအဖ စ...
Pop legend Michael Jackson dies
Burma's 'secret tunnels' leaked
မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒေ...
7 July အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ဂျပန်တွင်ကျင်းပမည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
Democracy & Peace Award ကို ကိုယ်စားလက်ခံရယူခဲ့သူတ...
၂၂ ရက်နေ့ သတင်းများ ။.....။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့တွင် ကိုရီးယားလွှတ်တော်အတ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ် မှ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ U N ရှေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်မွေးနေ့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် စစ်သံရုံးရှေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ အလှူတော် ( ကိုရီးယား )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အတွက် ကိုရီးယားဘုန်းတော်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့မှာ မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက...
ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး မှာ...
ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် အလှု ဒါန
မနက်ဖြန် မှာပြုလုပ်မဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ ...
၁၇-၀၆-၂၀၀၉ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ။....
မနက်ဖြန် ၁၇ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်သေ၂ ဦး အ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၄)နှစ်ပြည့် ...
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ လျှို့ဝှက်ဆက်ဆံရေး li...
Birthday Message for Ms. Aung San Suu Kyi
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၄ နှစ်မြောက်ေ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နယ်မြေ ဂျပ...
Voice of Burma (June 14 Issue)
၂၁ရာစု ကျောက်ခေတ်ဂူအောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ။
ဘက်ခမ်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး တောင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့် ဇနီးတရာ...
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကို မထိခို...
တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းတပုဒ် (ပေးစာ) link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၆၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ပွဲ အထိမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် စစ်သံရုံးရှေ...
စစ်အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၄၀၀၀ ခန့် ...
June 4, 1989 Tiananmen Square protest have never f...
-နစက တပ်ဖွဲ့များ၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မူကြောင့်...
FDB-E Bulletin52009
FDB Media Release June209_2
စစ်အုပ်စုဘက်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့် လုံခြုံရေးများ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေရေးအတွက် ခ...
A Brief Background of John Yettaw
ဒလမြို့နယ်ရှိ ဓနုတ်စေတီကြီး ပြိုကျ၊ လူ (၅၀) ကျော် ...
Statement by the President Barack Obama on Aung Sa...